Nkwukọrịta Kenja - WRSP
MGBE OZI KENJA
1922 (July 14): A mụrụ Kenneth Emanuel Dyers (ndekọ ndị agha nyere 1920).
1941 (7 August): Ken Dyers debara aha na Australian Army.
1943: Annette Stephens mụrụ.
1944: Ken Dyers gbara akwụkwọ n’ụlọ ikpe ugboro abụọ, Jenụwarị 24 na July 4.
1946: A tọhapụrụ Ken Dyers na ndị agha Australia n'ihi enweghị ike iche echiche. Ọ lụrụ Judith Scott Fox (nke gbara alụkwaghịm na 1950).
1948: Janice Rita Hamilton mụrụ.
1950: Kenneth Emanuel Dyers nwere ikike nwebisiinka ọrụ ahụ Sistemụ Akaụntụ Dị Mfe.
1951: Ken Dyers lụrụ Marie O'Donnell onye ya na ya nwere ụmụ abụọ, Mike na Steve (gbara alụkwaghịm na 1973).
1974-1977: Jan Hamilton nọ na United Kingdom na Australia Council nyere ha aka ịmụ akwụkwọ.
1978: Ken Dyers na Jan Hamilton zutere ma nwee mmekọrịta ịhụnanya.
1982: Dyers na Hamilton guzobere Kenja (nke sitere na aha ha nyere). Ha mechara chọpụta na ọ pụtara “amamihe” n’asụsụ Japanese.
1993: E boro Ken Dyers ebubo mpụ iri na otu megide ụmụ nwanyị anọ n'etiti afọ asatọ na iri na ise. A mara ya ikpe n'otu ebubo, mana a kagburu ikpe ahụ site na ịrịọ arịrịọ.
1994: Otu nwanyị Kenjan mere ebubo ụgha nke mwakpo mmekọahụ megide Stephen Mutch, onye omeiwu Liberal na ụlọ omebe iwu New South Wales, na onye na-akatọ Kenja kemgbe 1992.
1998: Cornelia Rau nọrọ na Kenja maka ọnwa ise wee wepụ ya ike.
2004: Ndị agha nchekwa Australia jidere Cornelia Rau na Eprel wee nọrọ ọnwa iri n'ụlọ mkpọrọ Brisbane na emesịa na Baxter Detention Center, na-enyo enyo na ọ bụ onye kwagara na-akwadoghị iwu. E weghachiri ya na ezinụlọ ya na February 2005.
2005: girlsmụ agbọghọ atọ dị iche iche na-eto eto gosipụtara ebubo nke mmegbu n'ụzọ mmekọahụ megide ndị Dyers, ma boro ha ebubo.
2006: Kenja gbara Balmoral Beach na Mosman Council maka mmeghe nke ntinye nke mbido ụgbọ mmiri mbụ na ụbọchị Australia, Jenụwarị 26, 1788.
2007: Alison Pels wetara ebubo nke mwakpo mmekọahụ megide Dyers, nna ya Martin Pels hapụrụ Kenja Communications.
2007 (July 25): Ken Dyers gburu egbe site na mgbọ mgbe a gọnahụrụ ya ịhapụ ụlọ ikpe na-arịa ọrịa.
2007: Mgbasa mgbasa ozi "Act for Change" nke Kenja chọrọ igosipụta Ken Dyers dị ka onye nwụrụ n'ihi okwukwe nke nnwere onwe obodo.
2007-2019: ogbo nke “akwukwo” Ikpe ikpe ruo mgbe egosiri Innocent gara Australia na ebumnuche ikpocha aha ndi Dyers.
2008: Melissa MacLean na Luke Walker's Beyond anyị Ken wepụtara akwụkwọ akụkọ.
2012: akụkọ ndụ Annette Stephens, Ezi Nwa Nwaanyị: Ọ Nọgidere Na-agbachi nkịtị ruo ogologo oge, e bipụtara.
FOUNDER / GROUP AKISTKỌ
Kenneth Emanuel (“Ken”) Dyers (1922-2007) bụ ihe dị mgbagwoju anya na ọtụtụ akụkụ. N'ịbụ onye Kenja na ndị òtù ya natara dị ka onye nkụzi ime mmụọ, onye ndu na-adọrọ adọrọ na "nnukwu Australian" nke ndị nkatọ na-akpasu iwe na ndị mkpagbu mere ka ọ daa n'ala (Tibbitts 2007), a katọghị ya n'ike n'ike dị ka onye egomaniac aghụghọ, onye na-edina nwoke n'ike, onye na-akwa iko, na ime mmụọ conman site na ndị aghụghọ ya. Esemokwu dị iche iche na-adịkarị n'etiti echiche "onye nyocha" nke ndị nkuzi okpukpe na nke mmụọ, ndị ndị na-eso ụzọ na-asọpụrụ dị ka ndị maara ihe na ndị na-eme omume ọma, yana otu esi ahụta ha na mmekọrịta mmadụ na ibe ya (Knott 2005). Weebụsaịtị Kenja, onye mgbasa ozi kachasị nke echiche "onye nyocha", gosipụtara Dyers dị ka dike, na-eje ozi na ndị agha Australia n'oge Agha IIwa nke Abụọ. A sịrị na ọ nọ na ọgụ na El Alamein, Finschhafen, na Lae; e nyere ahụmịhe ya n’oge agha dịka ihe kpatara atụmatụ Dyers nke “Energy Conversion Meditation” (ECM) na ntọala Kenja n’afọ 1982, afọ iri atọ na asaa mgbe agha biri. Dyers kwuru, sị:
Ije ozi na ọgụ, achọpụtara m na nghọta, echiche mmadụ na nkwukọrịta bụ ngwa ọrụ kachasị mkpa iji lanarị. Alaghachiri m Australia kpebisiri ike ichebe echiche mmadụ na nkwukọrịta na omume m niile. Aghọtara m na ọ bụrụ na ejiri echiche mmadụ, omume arụrụala nke agha agatụghị ada ('Co-guzobere: Ken Dyers', Kenja Trust, nd).
N'ezie, ọrụ ndị agha Dyers nwere nsogbu karịa Kenja ga-atụ aro. Mgbe ntorobịa ya na-ejegharị ejegharị, ọ banyere ndị agha na August 1941. Na 1944, afọ ọ gbara afọ iri abụọ na abụọ, a kpọchiri ya n'ụlọ ikpe ugboro abụọ (National Archives of Australia 2017). N'afọ sochirinụ, a tara ya mma ugboro abụọ maka inupụ isi. E nwere akwụkwọ agha itoolu metụtara Dyers e gosipụtara na Cult Education Institute (nke a na-akpọbu Rick Ross Institute of New Jersey) webụsaịtị, ihe kpatara e jiri wepụta ya na August 1946 gụnyere “enweghị mgbaka” 2014). Dyers, na Kenja n'aha ya, mere ka ọ ghara ịga nke ọma na ọrụ agha ya, kama n'ụdị ejiji L. Ron Hubbard (1911-1986), onye guzobere Scientology, mere. Nke a abụghị ihe mgbagwoju anya, dịka Ken Dyers so na Chọọchị Scientology maka oge (Stephens 2012: 83).
N'ime ndụ ya mgbe agha biri, Kenja na-ekwu na ndị Dyers nwere nnukwu ihe ịga nke ọma na ụlọ ọrụ na-ebipụta akwụkwọ (ọ bụ onye na-ere ahịa encyclopedia), yana onye isi ụlọ ọrụ. Australian National Archives kwenyere na na 1950 o gosipụtara ikike mbipụta akwụkwọ nke akpọrọ Sistemụ Akaụntụ Dị Mfe (National Archives nke Australia 2017). Dabere na Kenja, ọ gbanwere ọrụ wee bụrụ onye ndụmọdụ "dịka onye ndụmọdụ nkwukọrịta… na ahụike isi" ("Co-guzobere: Ken Dyers" nd). Alụmdi na nwunye ya nke abụọ kwụsịrị na 1973, na afọ ise mgbe nke ahụ gasịrị, ọ hụrụ Jan Hamilton (b. 1948), onye na-eme ihe nkiri, onye na-egwu egwuregwu na onye nkụzi mbụ bụ onye n'oge ahụ na-eme ka klaasị na-akụzi. Hamilton dị afọ iri abụọ na isii Dyers. Ọ ghọrọ nwunye ya nke atọ, ha hiwere Kenja (aha jikọtara aha mbụ ha) na 1982 (Elliott 2010: 4). [Foto dị n'aka nri] Ha mechara chọpụta na "Kenja" pụtara amamihe na Japanese. Kenja na-ekwu na a kpaliri ndị Dyers ịgbanwe ndụ ya na 1970, na-ahapụ azụmaahịa ya na-aga nke ọma na-arụ ọrụ nwa oge dị ka glazier, site na nchegbu gbasara ọnọdụ mmekọrịta ọha na eze na Australia, gụnyere usoro ọdịnala, ị drugụ ọgwụ ọjọọ, na ịkwa iko (Steel 2017). Ndị Dyers bụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị na-achọghị mmekọrịta ọha na eze, Kenja na-enwekwa ọnọdụ oge ochie. E gosipụtara nke a site n'ịgba egwu ịgba egwu na egwuregwu a na-eme na otu ahụ, nke Hamilton na Dyers na-elekọta, onye isi na nna ochie nke Kenja (Cusack 2017: 496). Dịka onye nkuzi ime mmụọ, Dyers bụ onye na-emegide ọdịbendị na ịnabata ihe.
Afọ iri ka e guzobere Kenja, ebulitere ebubo nke mmegbu n'ụzọ mmekọahụ banyere ndị Dyers site n'aka ụmụ nwanyị Kenjans toro eto na ụmụ agbọghọ nọ n'okpuru afọ. Onye Liberal (gụrụ mgbanwe) Onye otu nzuko omeiwu nke New South Wales na onye na-emegide "nzuzo" Stephen Mutch (onye mechara bụrụ onye ọrụ na Mahadum Macquarie) gbakọtara akaebe (ọ nwere ndị enyi na Kenja nke nwa ya nwanyị bụ otu n'ime ndị na-eme mkpesa) wee mee okwu na nzuko omeiwu nke steeti na isiokwu ahụ na 1992. Na 1993, Dyers dị afọ iri asaa na otu, "boro ebubo iri na otu nke mmegide mmekọahụ megide ụmụ agbọghọ anọ gbara afọ asatọ na 15" (Elliott 2010: 4). Kenja malitere mkpọsa nke mmekpa ahụ na mkpagbu megide Mutch maka ikpughe ndị Dyers, nke gụnyere ịkpọ oku na akwụkwọ ozi na-eyi egwu, ndị Kenjans na-eme ihe ngosi na agbamakwụkwọ Mutch na 1994, na-agbaso, na ọbụna otu nwanyị Kenjan na-ebo ya ebubo mwakpo mmekọahụ (nkwupụta nke a jụrụ ụlọikpe). Na 1993, ndị Dyers enwetaghị iwu; a mara ya ikpe maka ebubo dị ala nke mwakpo na-ekwesịghị ekwesị. Odeakụkọ bụ Alex Tibbitts kọrọ na a gwara ndị Kenjans na 1993 ka ha ghachitere Ken Dyers, iji mebie ndị na-ebo ya ebubo (Tibbitts 2008).
Enwere akwụkwọ mkpegharị ikpe abụọ na Courtlọikpe Kasị Elu nke Australia na 2000 na 2002, ebe a na-enye iwu ikpe nke atọ (Maclean na Walker 2008) onye isi na-ahụ maka ikpe ọha na eze kpebiri na ọ gaghị enye ya iwu. Katherine Biber na-atụle ikpe ahụ site na usoro iwu, na-akọwa na onye mkpesa, "AP," kwuru na "na 1988, mgbe ọ dị afọ 13, Dyers, mgbe ahụ afọ 66, wakporo ya n'oge 'usoro nhazi' na ' ime ụlọ ike '. O buru ụzọ mee mkpesa banyere mwakpo ahụ na 1993 ”(Biber 2005: 20). Ndị Dyers boro ebubo na ọ na-edozi Kenjan ọzọ, Wendy Tinkler, na onye enyemaka ya (nwanne nwanyị Jan Hamilton) gosipụtara nke a. Agbanyeghị, akpọghị Tinkler ka ọ nọrọ ebe ọgbụgba ama ahụ ma ekwughi okwu Dyers n'okpuru iyi. Biber na-ekwu na ụzọ ndị ọka ikpe kpere ikpe na-ezighi ezi: dịka ọmụmaatụ, "okwu ndị a kwuru… ndị juri banyere ọdịda nke onye agbachitere inye ihe akaebe where nchekwa onwe gị ”(Biber 2005: 19). Na 2005 ebubo ọhụrụ pụtara na ebubo Dyers na mwakpo mmekọahụ nke ụmụ agbọghọ abụọ na-eto eto. A gbapụtara ya ma gosi iwe ya; ma mgbe akụkọ banyere nwatakịrị nwanyị ọzọ, Alison Pels, ada nke ndị otu ogologo oge nke Kenja, bụ ndị bịara ibuso ya ebubo mebiri na 2007 Dyers gburu onwe ya site na egbe egbe na isi na July 25, 2007 (Anon 2007).
Bevan Hudson, onye otu ogologo oge nke Kenja ruo afọ iri abụọ na ise, gwara onye nta akụkọ na onye nta akụkọ redio bụ Rachael Kohn na n'oge ahụ na ndụ Dyers, ọ nọ na nrụgide dị iche iche: ajuola ya ịbụ onye otu ndị weghachiri azụ Njikọ (RSL) Klọb na Bundeena, obodo ndị dị n'akụkụ mmiri na ndịda Sydney ebe o bi; ọ chọọ ịnọ n'ụlọ ikpe oge na-adịgide adịgide na-arịa ọrịa, nke a jụrụ n'ihi na e nwere ihe nkiri banyere ya na emume ekeresimesi Melbourne Kenja na 2006 nke gosipụtara na ahụike dị mma; na ihe nkiri ihe nkiri nke Melissa Maclean na Luke Walker ka enyere ikike ime banyere Kenja wee bụrụ ihe ọzọ karịa ngosipụta dị mma nke ndị Dyers nke ya na Hamilton tụrụ anya (Kohn 2008). Otú ọ dị, obi abụọ adịghị ya na ọ bụ atụmanya nke ịga n'ihu ụlọ ikpe, nkwenye nwere ike ikpe na ụlọ mkpọrọ bụ nke kachasị n'uche ya na ọ nwere ike ịkpalite igbu onwe ya (Kohn 2008). Jan Hamilton gara n'ihu na-agba ọsọ Kenja, ebumnuche ya ugbu a bụ iji gosipụta ịdị ọcha nke Dyers, kpuchido aha ya dị ka onye nkuzi ime mmụọ na ọgụgụ isi na-enweghị atụ, yana ịkatọ ndị nkatọ ya na "cabal" nke ndị iro na-ekwu na ha kpara nkata ibibi ya , otu otu nke Hamilton kwenyere gụnyere Stephen Mutch, Cult Aware (otu ndị na-emegide òtù nzuzo ugbu a nke nwere Scientology, nke na-enweghị ọnụnọ a na-ahụ anya na Australia), na ndị uwe ojii na ndị ọrụ iwu, na ndị ọzọ (Mitchell 2018). Ogologo oge Kenjan, Bevan Hudson, na-agba akaebe na n'oge a ka a gbara ndị otu ume ka ha nwee ike ịnabata echiche izu nzuzo banyere otu esi eme ka Dyers daa (Kohn 2008). Kwa afọ na ụbọchị ncheta ọnwụ ya, Kenja Communications na-ewepụta mgbasa ozi zuru oke ọnụ na akwụkwọ akụkọ mba na steeti na-asọpụrụ ebe nchekwa Dyers (National Library of Australia 2006-2007). Mgbasa Ozi, ihe omume nyocha nke mgbasa ozi na Australian Broadcasting Commission (ABC), kwuru na 2007 na mgbasa ozi nwere ike bụrụ $ 130,000 ma na 2009 katọrọ Fairfax Media Group maka ịgbasa mgbasa ozi (ABC 2009).
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ nweghị akwụkwọ agụmakwụkwọ na Kenja. Nchoputa nke ndi ochichi n’ime otu a aghaghi iji akwukwo akuko, mmemme redio, pọdkastị na webụsaịtị na ntaneti, ihe akụkọ televishọn, ihe ncheta nke onye sobu, Annette Stephens (Gillan 2012), na Melissa Maclean na Luke Walker. , Beyond anyị Ken (Maclean na Walker 2008). Ntaneti bu ihe omuma bara uru; saịtị Kenja edebewo okwu nkuzi nke ndị Dyers, na ọtụtụ "ndị na-emegide òtù nzuzo" dị iche iche n'ịntanetị na-anakọta mkpokọ akuko, akwụkwọ ndekọ gọọmentị, na ọtụtụ akwụkwọ ndị bụ isi na-emebi, n'ụzọ ụfọdụ, "ọrụ" gọọmentị nke ndị Dyers dị ka onye ndu mmụọ. na "nnukwu Australian" (Kenja Trust nd) nke Kenja na-akwalite. National Archives nke Australia na National Library of Australia nwere akwụkwọ ụfọdụ. Otu ajụjụ dị mkpa na-ebilite bụ ma Kenja bụ nzukọ ime mmụọ ma ọ bụ nke okpukpe. Stephens na-echeta na “Ken kwuru na Kenja abụghị okpukperechi ma ọ nweghị usoro nkwenye ma ọ bụ echiche. Otú ọ dị, e nwere usoro nkwenkwe. Ọ rụrụ ọrụ dị mkpa ma nye Ken nhọrọ iji kwusaa Kenja okpukpe, dị mkpa "(Stephens 2012: 79). A na-ere Kenja Nkwukọrịta dị ka mmegharị mmepe onwe onye. Agbanyeghị, enwere ike ịchọta ụfọdụ echiche Dyers na okpukpe ọhụrụ a maara nke ọma na narị afọ nke iri abụọ, Chọọchị nke Scientology.
A nabatara na ndị Dyers so na Scientology; Akwụkwọ ozi edepụtara na 1992, "Ndị na-egbochi ndị mmadụ na ndị na-ebelata ndị otu" gụnyere Kenja, nke a makwaara dị ka Kenja Personal Ability Center na Personal Evolvement Center (Steel 2017). Nke a na-egosi na Churchka nke Scientology lere Dyers anya dị ka "ogbe," onye weghaara Hubbard "Tech" wee jiri ya mee ihe na-abụghị Scientology ebube (Cusack 2017). O nwere ike ịbụ na ndị na-agba akwụkwọ sonyeere Scientology na njedebe 1950s ma ọ bụ mmalite 1960s (Cannane 2016: 72). A maghịkwa ogologo oge ọ nọrọ na Scientology; Annette Stephens chere na ọ hapụrụ na 1973, mana uche ya enweghị ike ịkwenye:
Ozi Ken bụ ịga n'ihu karịa onye guru ya, mbubreyo L. Ron Hubbard. Ken ga-eti ya ihe n’egwuregwu nke ya. Ọ bụghị na ọ gwara anyị ndị Kenjans oge mbụ na ọ bụ onye ofufe nke Scientology; ọ bụ naanị ihe ọ matara gbasara ọtụtụ ihe. Ken kwuru na nnọkọ ya dị elu karịa "Auditing" Scientology; dị ka ọ dị, ụfọdụ n'ime iwu nhazi oge mbụ ya bụ otu.
Ikekwe nnukwu nsogbu Ken nwere, n'ịkọ akụkọ ndụ ya, bụ ịhapụ Scientology na ya. Amụtara m mgbe e mesịrị na ọ bụ onye ọrụ ụkpụrụ omume na onye otu ogologo oge, na, na ọtụtụ afọ, ndị Kenology edepụtara Ken dị ka "onye na-egbochi". Naanị nwoke Ken kpọrọ enyi ya (ndị Kenjans bụ "ezigbo ndị enyi ya") bụ onye bụbu ọkà mmụta sayensị wee bịa na klaasị Ken ruo oge ụfọdụ, mana ọ kwụsịrị ịbịa wee yighachi na Scientology (Stephens 2012: 83).
N'ezie, Bevan Hudson, ogologo oge Kenjan, na-ekwu na mgbe ọ gara iji hichaa ebe obibi ndị Dyers, Ken na-enwekarị akwụkwọ Scientology kachasị ọhụrụ na teepu, nke ga-atụ aro na na 1980s na 1990s Dyers ka nọ na kọntaktị , ma ọ bụrụ na ọ bụghị onye otu, Church of Scientology (Kohn 2008).
Mgbe ndị Dyers na Hamilton zutere ma hiwe Kenja, e webatara Dyers '"Energy Conversion Meditation" na mmekọrịta klaasị "klowning" nke Hamilton, ha yiri ka ụzọ ahụ ha abụọ ha nhata. Agbanyeghị, ka Kenja mepụtara Dyers pụtara dị ka onye isi na-adọrọ adọrọ (na mmụọ nsọ ahụ, ọbụlagodi afọ asatọ ya, pụtara na Beyond anyị Ken), na Hamilton bụ akụkụ-dị ka klowning nyere ECM na "nhazi." Hamilton, na ọnwụ nke Dyers, abụghị naanị nwanyị di ya nwụrụ na-eru uju, kama ọ bụ "onye na-ede ọkụ ọkụ" a raara nye ncheta nke nwoke ukwu ahụ. Stephens sonyeere Kenja na 1982, o jikwa ịhụnanya cheta Hamilton nke 1980s; ihe nchoputa o nwere mgbe o choputara n'ime ya, Clarence, nwere otutu ihe ya na ya ịnọ na Kenja dika mmeghari anya ya nke oma nye ndi Dyers (Stephens 2012: 44-47). N’oge na-adịghị anya ọ ghọrọ Kenjan oge nile, na-ahụ Jan dị ka onye nlereanya: “Elere m Jan anya wee hụ nganga ya. Ndị ahụ niile guzo ọtọ ma na-ekele ya. Ọ bụ ihe atụ anyị, nwanyị nkịtị na njem na-agbanwe ụwa. Ọ ghaghị iji obi ụtọ na ịdị umeala n'obi na-eduga, ọ gaghị ada ada. Ken emeworị ya ma ọ nweghị ihe ọ bụla iji gosipụta "(Stephens 2012: 58).
A ghọtara nkwenkwe nke Kenja nke ọma na Hamilton nwere otu echiche nke onye ahụ, nke mere ka klas ya "klowning" dịka ụzọ isi kpọtụrụ "nwa dị n'ime" (nke a kpọrọ Kenja Communications "mmadụ" ) na ndị na-agba agba bụ́ ndị na-ele “mmụọ nsọ” anya. Otú ọ dị, ụzọ e si nwee njikọ abụọ a nke onye ahụ na echiche a na-akọkarị na ụmụ mmadụ nwere ahụ́ na nke ime mmụọ, bụ́ nke a na-achọta n'ọtụtụ okpukpe. Kama, Dyers na-ekwu maka "mmụọ agbakwunyere" (Maclean na Walker 2008), nke bụ otu ihe ahụ dị ka "ahụ ttans" dị na Scientology (Urban 2011: 103). Ozizi ndi Dyers weghachitere L. Ron Hubbard's Scientology cosmological vision, ka Kenja buru ihe di nkpa, ebumnuche ya bu izoputa uwa nile, ntughari nke ozi L. Ron Hubbard ka o “kpochapu uwa” (Westbrook 2017: 42 ). Bevan Hudson gwara Rachael Kohn na "n'otu ìgwè dịka Kenja, enwere echiche bụ isi na ụwa bụ ebe rere ure, ọ bụ ya mere ndị mmadụ ji aga Kenja, ka ha wee nwee onwe ha ka mma" (Kohn 2008). Hudson, onye nwere ọgụgụ isi na onye egwu egwu, chere na ndị Dyers “webatara ụfọdụ echiche galactic ndị mara mma, ị mara, na ọ ga-abịa site na mbara ụwa ọzọ, ọ ga-edozikwa Jizọs Kraịst ma chee, Oh dammit, I Aga m gbadaa ma dozie m onwe m, ndị ọrụ a enweghị isi, ị maara ”(Kohn 2008). O kwenyere na ndị Dyers kwuru banyere otu ụlọ ọrụ, "Xenon", onye o yiri ka ọ bụ Xenu nke Scientology's Operating Thetan Level 3, na ndị Dyers ji okwu sayensị dị ka eserese na thetans na nkọwa ya banyere nkuzi Kenja, na na njedebe 1980s na Kenjan ndị nhazi na-azụ ma na-agụ akwụkwọ Scientology (Kohn 2008).
Ya mere, Dyers kụziri na ụwa bụ ọchịchịrị na apocalyptic, na Kenja bụ ikike dị mkpa maka ezi; ya mere, ndị Kenjans kwenyere na ebumnuche ha bụ ịzọpụta ụwa. Okwu ndu nke Kenja Communications bu “nghota nke ime mmuo na uwa nke uwa” (Kenja Trust nd), na Stephens choputara na:
Dabere na data Ken, enwere ndị isi mmụọ nke gụnyere mmụọ ndị ọbịa, mmụọ mmadụ, mmụọ mmụọ ọjọọ (nke a na-akpọkwa mmụọ mmakọ) na ụlọ ọrụ. Ndị mmụọ ọbịa si na mbara igwe ọzọ bịa na mbara igwe a, site na mgbawa. Ndị ọbịa a na-enweghị obi ọjọọ, ebe ọ bụ na ha enwetala ọtụtụ ndụ rụrụ arụ n'akụkọ ihe mere eme nke eluigwe na ala, tara ahụhụ site na njide ụwa ebe a (Stephens 2012: 76).
Nke a bụ ihe doro anya nke ọma sitere na Scientology: Dyers na Hamilton chepụtara otu ogbako na "Nkwukọrịta Na Oge, Oghere na Ike" (nke na-ekwughachi Ron Hubbard's MEST, Matter Energy Space Time); Ndị na-agba agba were n'ọrụ “Tone Scale” nke Hubbard depụtara ụfọdụ mmetụta na akparamaagwa maka ndị Kenjans; Dyers jụrụ akparamaagwa na isi mgbaka dika Hubbard, na-azọrọ na Kenja “nhazi“ bụ naanị ihe achọrọ iji gwọọ ọrịa; Ndị e tere mmanụ ji ọgwụ ọjọọ eme ihe ike na ụdị ọgwụ ọ bụla; na Kenja chụpụrụ ndị òtù nwere ajọ ọrịa uche ma ọ bụ nke uche (Stephens 2012: 85, 41, 49, 89, 51). Ọzọkwa, Dyers kụziiri Kenjans nke ahụ
mmụọ nke ndị mba ọzọ bụ ọgụgụ isi kachasị elu, dị iche na ahụ mmadụ, mana ọ chọrọ ahụ ijikwa, nke ga-eme ihe ọ chọrọ. Ihe omuma ha di omimi furu efu, ndi mmuo ghoro mmadu nke mere ka ha kwenye na ha bu aru mmadu, ma nagide ha isi. Kama ịmepụta njirimara kwesịrị ekwesị maka ahụ mmadụ, ọ ghọwo ihe dị warara - Abụghị m Annette, Annette bụ njirimara dị ugbu a, obere oge na mụ, mmụọ, nọ n'ime ya (Stephens 2012: 77).
Nke a dabara na njirimara Hubbard nke mmadụ dị ka ọ bụghị naanị ahụ, kama ọ bụ "oge," mmụọ nke ụwa ọzọ nke ga-emecha tọhapụ site na mgbochi MEST. A na-akụzi ndị Kenjans, dị ka ndị ọkà mmụta sayensị, ka ha hụ onwe ha dị ka ahụ na uche, mana n'ozuzu dịka mmụọ, ihe na-adịghị anwụ anwụ ma bụrụ nke dị mkpa karịa ihe ọ bụla bụ akụkụ nke ndụ kwa ụbọchị. Mgbe a na-eme ntụgharị uche ntụgharị uche ike (ECM), site na ahụmịhe ahụ na steeti dissociative na-emekarị, na-eme ka nkuzi Hamilton na Dyers na-agbakwunye ụdị mmadụ ahụ. Yabụ, otu mmepe mmepe na-akuzi echiche nke ihe atụ nke gbatịrị gafere ndị sonyere na-achọ imeziwanye nkwukọrịta ha ma ọ bụ aka ọrụ ha.
Odi uzo ozo nke “nkwenye” nye ndi otu Kenja nke kwesiri ekwuputa; ndepụta nke ụkpụrụ iri na atọ a maara dị ka "Kenja Ethics" (Kenja Trust nd). Principleskpụrụ ndị a bụ:
1. Ebumnuche anyị bụ inyere onye ahụ aka ịbawanye ugwu nke onwe ya ma zụlite ikike zuru oke iji lanarị ọ withụ n'akụkụ niile nke ndụ ha.
2. Kenja bu ulo oru nkuzi iji mee ka ndi mmadu nwekwuo ike okike ha na ndu ha. Ọ bụrụ na mmadụ leghaara nke a anya ma mepụta Kenja ka ọ bụrụ onye ọzọ maka okike nke ndụ ya, a gwara ya ka ọ pụọ ruo mgbe ọ ga - enwe ike mepụta ndụ nke aka ya.
3. A na-eji nkà ọ bụla enwetara na nkwukọrịta eme ihe n’ụzọ okike n’ebe ndị ọzọ nọ. Ọ bụrụ na mmadụ jiri nkà ndị a na-ebibi ndị mmadụ, anyị agaghị arụ ọrụ na onye ahụ.
4. Anyị nabatara ikike onye ọ bụla nwere ịnata nchọta na ngosipụta nke mmụọ nke ha ka ọ masịrị ha. (Ndị mmadụ dị iche iche na-arụ ọrụ a).
5. Onweghị onye kenja tinyere asịrị.
6. Onweghi onye gburu agwa onye ọzọ.
7. A na-akwanyere ezinụlọ ahụ ùgwù, ọ dịghịkwa onye na-etinye aka na ezinụlọ ya ibibi ihe.
8. Ọ bụrụ na nwoke na nwanyị na-enwe mmekọrịta ọ dịghị onye na-eme ihe ọ bụla ga-emebi mbibi mmekọrịta ahụ.
9. Anaghị ana anyị ego ego maka ọzụzụ ha na-enweta na Kenja.
10. Studentsmụ akwụkwọ na ndị okenye nọ n’afọ iri na ụma na-akwụ ụgwọ ego ha chere na ha nwere ike imeli ma ọ bụ anaghị ha ego maka ọzụzụ. (N'ezie, ọtụtụ n'ime ọzụzụ, nchịkwa na okike nke ihe a na-eme nke Kenja na-akwụghị ụgwọ ọ bụla. Enwetara uru ọ bụla maka okike nke ihe ahụ).
11. Onweghi onye debanyere ulo oru ma obu klaasi obula na Kenja.
12. Enweghị nkuzi na Kenja - naanị klaasị na ebe obibi, mezue n'onwe ha. A na-akwụ ụgwọ ọrụ maka ọbịbịa. Ọ bụrụ na akwụ ụgwọ ọrụ ọ bụla tupu oge eruo na onye ahụ anaghị aga, a na-eweghachi ego ahụ na arịrịọ.
13. Anyị agaghị arụ ọrụ na ndị anyị chere na anyị agaghị enyere aka (Kenja Trust, nd).
Na mbu ilere anya na ndetu a putara ihe ziri ezi, mana otutu ukpuru ndi ozo di ka ihe ngabiga karia idebe ya. Annette Stephens kwetara n'ezoghị ọnụ na mmeghachi omume riri ya na Kenja, na ndị Dyers karịsịa, mere ka ọ gbahapụ ụmụ ya (Gillan 2012), na akụkọ banyere ezinụlọ na mmekọrịta ndị ọzọ na-agbakọ, yana aghụghọ ndị a na-eme iji mee ka ndị otu na-alụbeghị di na nwunye ìgwè. Cornelia Rau, onye uche ya mere ka ọ ghara ịkọwapụta mgbe o tinyechara aka na Kenja na 1998, onye ọzọ so na-agba ya ume, usoro a na-arụ iji "jikọta" ndị ịhụnanya na-adịghị (Manne 2005). Mmachibido asịrị pụtara na ndị Kenjans anaghị atụlekarị echiche banyere onye ndu, ma ọ bụ jiri ndetu kọwaa mgbe klowning ma ọ bụ nnọkọ ECM, nke mere n'ezie ọnọdụ Hamilton na Dyers (Maclean na Walker 2008). Finalkpụrụ ikpeazụ dị n'eziokwu pụtara na ndị nwere ọgụgụ isi ma ọ bụ nsogbu uche, ma ọ bụ onye ọ bụla jụrụ ọtụtụ ajụjụ ma ọ bụ gosipụta enweghị njikere itinye onwe ha na Kenja, ọpụpụ site na otu ahụ ngwa ngwa.
Nkwukọrịta Kenja nwere ọtụtụ njiri mara nke azụmaahịa karịa okpukperechi. A na-ere ya dị ka nzukọ na-emeziwanye onwe ya nke nwere ike ịkụziri ndị na-eso ụzọ ka ha kwurịta okwu nke ọma ma nwee ihe ịga nke ọma n'onwe ha. E webatara ngwa nkwukọrịta nke nzukọ ọmụmụ ihe ma ọ bụ ndị sonyere n ’ụlọ ọrụ ahụ gụnyere ECM, klaasị clowning, na ihe nkiri emere (Maclean and Walker 2008). [Foto dị n'aka nri] jalọ ọrụ Kenja nyere ndị mmadụ ndụmọdụ n'otu n'otu (PC) ma ọ bụrụ na mmadụ ejiri onyinye a gbaa ume ka ọ debanye aha maka usoro ọmụmụ ogologo oge na usoro nhazi ọzọ na ngalaba Kenja na Sydney, Melbourne, na Canberra rụpụtara . Kenja bụ ihe a na-adịghị ahụkebe, n'ihi na ọ nọgidere bụrụ njem Australia nke na-enweghị ọnụnọ mba ụwa (Samways 1994: xi).
A na-atụ anya ka ndị Kenj sonye n'ọtụtụ ọrụ, site na ọzụzụ egwuregwu ruo na ngosi ihe nkiri zuru oke, na-atụ anya na ha ga-enwetakwa ego maka Kenja site na ire okooko osisi na ọrụ azụmahịa ndị ọzọ. O yikarịrị ka ndị ọkà mmụta ga-akọwa Kenja dị ka otu "nnukwu mkpa" otu. Hamilton na Dyers rụrụ ụka na itinye aka na ihe okike dugara na mmepe ime mmụọ, na ime ka ikike nkwukọrịta mụbaa. O yikarịrị ka e mere usoro mmemme ndị a iji wepụta oge niile nke onye otu, yana ọtụtụ ego ya. Onye ọkaiwu mbụ Melissa Maclean na onye bụbu onye na-eme ihe nkiri Luke Walker bu ụzọ kwurịta banyere ịme ihe nkiri banyere Kenja n'ihi na Walker gara Kenja ọnwa isii. N'ajụjụ ọnụ onye odeakụkọ Rebecca Albeck gbara, Maclean kwuru na ndị Kenjans anaghị amasị ya n'ihi na ọ "jụrụ ọtụtụ ajụjụ" (Albeck 2009: 89). Walker ghọtara na ọ gaghị enwe ike ịme akwụkwọ dị ka ndị otu a maara ya, ya mere Maclean gakwuuru Dyers na Hamilton wee malite ịse ihe ga-abụ Beyond anyị Ken. Ebubo a dọrọ Walker aka na Dyers, na mfu nke ndị otu dị ka Cornelia Rau na Richard Leape, wee lelee ihe nkiri ahụ n'akụkụ abụọ, echiche dị mma banyere ndụ maka ụfọdụ ndị Kenjans, mgbe ahụ echiche na-adịghị mma nke na-apụta na ọkara nke abụọ:
Ọ bụ aghụghọ ka mụ na Kenja nọrọ, hapụ ma mee ihe nkiri banyere ha? [Mana nke ahụ] bụ naanị ụzọ iji hụ ya n'ezoghị ọnụ. A sị na aghọtaghị m na aka adịghị ọcha, na ụfọdụ bara uru, ụwa nke Kenja bara uru, anyị agaraghị ewulite ihe nkiri ahụ dịka anyị mere. Maka ọkara ọkara mbụ ị hụrụ ụwa ha, ị ghọtara ihe mere ndị mmadụ ji nwee mmasị na ya, ị ghọtara akụkụ dị mma. Naanị mgbe nke ahụ gasịrị ka anyị malitere ịmegharị ya… (Albeck 2009: 89).
Omume ndị Kenjans so na nke mbụ Beyond anyị Ken bụ isi egwuregwu na egwuregwu. Jan Hamilton bụ onye ndu na-agba ume ụdị ọrụ ngosi a na ngosipụta. Na Beyond anyị Ken Hamilton kwuru okwu banyere Kenja imepụta gburugburu "nchekwa" maka ndị otu, ebe ndị mmadụ nwere ike mụta ịbụ abụ, ịgba egwu, ime ihe, ime egwuregwu mmega ahụ, igwu bọọlụ net, yana ọtụtụ ihe omume ntụrụndụ na nka ọzọ.
Isi ọrụ ime mmụọ, Ntugharị Mgbanwe Ike (ECM), nwere ike ịghọta dị ka nsụgharị nke Scientology Training Routines (TRs) nwere ihe nyocha nke nyocha na ngwakọta. Na Beyond anyị Ken Maclean na Walker sere Hamilton na Dyers na-eme ECM (Maclean na Walker 2008). Nke a gụnyere ịnọ ọdụ na ikpere ruo oge ụfọdụ na-ele anya na anya ndị Dyers. Ex-Scientologist Perry Scott kọwara OT TR0 (Operating Thetan Confronting) dị ka "ịnọdụ ala na anya mechiri emechi ruo ọtụtụ awa, ịghara imegharị ma ọ bụ na-agbagharị, 'na-eche ihu' onye nchịkwa" na TR0 Confronting dị ka ịnọdụ "na-emeghe anya ruo ọtụtụ awa, na-adịghị agagharị ma ọ bụ na-agbagha, 'na-eche ihu' onye nchịkwa recommended 2 aka elekere anya ”(Scott nd) Melissa Maclean gwara ya na ya enweghị ike ịse vidiyo Kenja na-enweghị eme ECM, na mbido ndị Dyers“ haziri ”ya. Nke a enweghị isi; ọ boro ya ebubo "inwe nsogbu" na ụmụ nwoke wee sị na ya na ya enweghị ike ịrụ ọrụ (Kohn 2008). Hamilton weghaara ya. Maclean hụrụ ECM nke na-enweghị obi iru ala, na-ahụ ya ka ọ na-elekwasị anya na ihe na-adịghị mma, na-egwupụta ahụmahụ ọjọọ na ncheta (karịsịa echiche ndị ahụ chere na ọ bụghị nke ha) kwuru na a ga-ekpochapụ ha (Fidler 2008). Nke a dị ka omume Scientology nke nyocha.
Mgbe Stephen Mutch kwurịtara Kenja na nzuko omeiwu nke New South Wales, o kwuru na ECM bụ ihe na-akpalite steeti hypnotic, ọ bụkwa usoro eji eme ka ndị isi '' saa ụbụrụ '':
Site na mkparịta ụka mụ na ndị otu Kenja gara aga, enwere m afọ ojuju na nzukọ a na-eji usoro itinye aka na-eme ihe na-adịghị mma ma na-ezochi iji chịkwaa uche maka ebumnuche na-enweghị isi banyere ndị ewebata bụ ndị aghụghọ nabatara na nzukọ ahụ. A na-ewetara ndị na-atụghị anya ha n'okpuru nduzi nke Ken Dyers na Jan Hamilton ka ha wee bụrụ ndị ohu, na-enyefe uche ha na ego ha na Kenja. Ndị na-agba agba na-ekwupụta na ha enwetara ihe ọmụma dịka Chukwu ma wepụta echiche nke ntụgharị ike nke na-eweta nghọta pụrụ iche banyere nzube nke ndụ. Eziokwu bụ na Ken Dyers bụ onye nwere mkpụrụ osisi na nkuzi ya bụ mkpofu ahịhịa mumbo (Mutch 1993).
Ndị Dyers kwuru na amachibidoro hypnosis na Kenja. Ọzọkwa, okwu Mutch ezighi ezi, dịka ndị ọkachamara n'ihe gbasara iwu, ndị ọkachamara n'ihe banyere uche, ndị ọkà mmụta gbasara mmụta okpukpe, na ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ kwenyere ugbu a na "ịkpụzi ụbụrụ" bụ okwu na-eduhie eduhie, na ihe ahụ enweghị isi na / ma ọ bụ adịghị adị. Agbanyeghị, a ga-ekwenye na Mutch dịka ọ chịkọtara ihe akaebe nke omume mkparị dị ka mmetụ mmekọahụ Dyers nke ụmụ nwanyị Kenjans, na imetụ nwoke na nwanyị aka na ECM Ihe ngosi nke ihe a na nzuko omeiwu NSW bụ ihe dị mkpa iji webata Kenja n'ihu ọha.
Annette Stephens nwere nsogbu dissociative n'oge ECM na ndị Dyers, ruo n'ókè nke na n'oge nnọkọ mbụ ya na ndị Dyers, ọ maghị ma enwere mmekọahụ ma ọ bụ na ọ bụghị:
E guzobere mbara ihu dị [na Hamilton na ụlọ Dyers] dị ka ọnụ ụlọ nnọkọ ya…
“Ọ dị gị iwepụ uwe gị?”
N'ezie m wepụrụ ha. Gini mere na, n'ihu Ken? Dị ka onye na-achọ ịlụ ọgụ, enwere m oge ụfọdụ uwe mwụda. Ọ ga-erite uru na nnọkọ ahụ: ike nwere ike ịba ụba n'enweghị nsogbu.
“Ahụ́ ọ̀ ruru gị ala?”
Ken chịkọtara oche ndị ọzọ, na-akụda ma na-akwagharị ha. Ebe a ma ọ bụ ebe ahụ? Ọ nọ na-achị ọchị na nkeonwe. Ọ chọpụtara na ọ gba ọtọ; o yi uwe zuru ezu.
Nọdụ n'akụkụ m, ọ gafere usoro ihe omume nke nnọkọ wee kwuo okwu ahụ bụ “bido”… Ka m lere anya n’ime ọkpụkpụ Ken nke ka na-enyo enyo, ụjọ tụrụ m na m nwere ike ifu ebe m na-agbago. Olu m sie ike ma m daba n'ime oche ndị ahụ.
Nnọkọ ahụ mechara; nye m, ọ ka malitere amalite. Abụọ na ọkara agafeela.
Ken dinara n’elu m na traụza na uwe mwụda ya na-ehu n’elu nkwonkwo ụkwụ ya. Ihe edoro m anya juputara n’uche m.
Ken guzoro. Ekike. Na-amụmụ ọnụ ọchị. “Nke ahụ bụ nnukwu nnọkọ Annette.”
Ọ rịọrọ maka nzaghachi. M sụrụ ngọngọ.
Enweghi m ike ịhụ foto ọ bụla, ma hapụ fim ọzọ dị n'isi m.
Achọpụtara m agba nke amụ Ken.
M na-eche, ajụjụ ahụ dị nkenke, ka anyị mere? A sị na Ken metụrụ m aka, ma ya fọdụkwa iso m nwee mmekọahụ, m gaara amata.
Kedu otu nwanyị ga-esi nwee mmekọahụ ma ọ maghị ya?
Ọ bụrụ na ọ nweghị ihe ọ bụla, m ga-ahụrịị isi ọbara ọcha. Nnukwu nnyapade ya na-amasị m.
Site na miri emi nke uche m n’amaghi ama, ihe n’onweghi ike gosiputara ikike ya. Emechiri m ejighị ihe n'aka m wee mechie ya. Onweghi ihe mere. Emechara m. Na nnọkọ, Ken ewepụtara ike m na-adịghị mma. Nke ahụ bụ ya. Ekwesịrị m ịma. M bụ ebe ahụ na Ken nọ na nnọkọ ahụ.
Agwara m ya, sị, “Ọ bụ, ọmarịcha nnọkọ; afọ ihe mgbu fepụrụ. ”
Annette bụ nnọkọ ahụ. Were obere oge, zọọ mmadụ gị, megharịa ya nke nta wee jee n'ụsọ osimiri. ”
Enweghị m oge maka ịgagharị n'akụkụ osimiri; enweghi obi ojoo ma erubere m Ken isi (Stephens 2012: 67-68).
Stephens nọrọ n'ọnọdụ na-esighị ike; Kenja dọtara ndị na-adịghị ike. Ahụmahụ ya abụghị ihe ọhụrụ; Melissa Maclean kwuru na ndị otu ya gwara ya na Jan Hamilton amabeghị na mbụ ndị Dyers na-edina ụmụ nwanyị Kenjans na nnọkọ ECM ya (nke a gbasara ndị "nhazi" ndị ọzọ ruru eru nke nwoke na nwanyị, ndị a gwara ka ha mesoo ya) nsogbu gbasara inwe mmekọahụ, ọ na-abụkarị igbo onwe nwoke agụụ mmekọahụ ọ bụ ezie na inwe ọnụ na inwe mmekọahụ nwere ike). Mgbe Hamilton chọpụtara na ọ "mechie ya [mmekọahụ na ECM] ruo nwa oge" (Fidler 2008). Mmetụta ọjọọ nke ụdị omume a nwere n'ahụ ndị na-esighi ike bụ isi ihe kpatara ndị otu nta akụkọ Australia jiri kpuchie ndị otu ahụ, nke enweghị nnukwu ma ọ bụ ama ama na Scientology.
Ken Dyers na Jan Hamilton bụ ndị isi nke Kenja Communications. [Foto dị n'aka nri] Na Beyond anyị Ken David Millikan, onye ụkọchukwu ụka Uniting bụ onye gbara Dyers ajụjụ ọnụ tupu ọ gbuo onwe ya, onye derela na "òtù nzuzo" dị iche iche n'Australia, gbara akaebe na ike Dyer na ọnụnọ ya. N'ihe banyere ịbụ onye na-adọrọ adọrọ, ọ bụghị naanị "njimara" ka onye ndu nwere. Ndị na-eso ụzọ na-enyere aka site na ịtụgharị uche na nnabata charisma na onye ndu, ụfọdụ ndị otu a nwere ọrụ pụrụ iche n'ịmepụta ma ọ bụ ịmepụta echiche nke charisma. Maka Kenja Communications, Jan Hamilton bụ onye nlekọta isi nke ndị isi Dyers. Ọ na-eme ememe dị ka "ngalaba-nchoputa" n'agbanyeghị doro anya na ókè n'etiti ya "klowning" na Dyers '"nnyocha" n'ime mmụọ mmadụ. A na-arara ọrụ ọha na eze nke Kenja Communications iji weghachite na ịsọpụrụ ọrụ nke ndị Dyers, Hamilton bụ onye isi ọrụ nke ọrụ a.
Enwere ọtụtụ ọrụ Kenja na-aga n'ihu ịhazi karịa afọ iri mgbe ọnwụ Dyers nwụsịrị. Nke kachasị mkpa n'ime ndị a, n'ụzọ doro anya, bụ "ihe nkiri akwụkwọ nkiri" Ikpe ikpe ruo mgbe egosi na aka ya dị ọcha, nke ndị nọgidere bụrụ ndị Kenjans ("A Witch Hunt" nd) gbara gburugburu Australia. Nke a bụ ọrụ bara uru, ebe ọ bụ na ikike ndị Dyers enweghịzi maka ndị otu. Akụkọ ya, nke egosiri dị ka izu ọjọọ na-ewetara nnukwu Australia, bụ ngwa ọrụ imepụta ndị ọhụrụ. Dyers bụ "onye nwụrụ n'ihi okwukwe", gọnarịrị ikpe ziri ezi ma chụpụ ya site n'aka ndị iro ekworo na obi ọjọọ (Kohn 2008). Kenja na-ekwusi ike na Sydney, Melbourne na Canberra; na ya kasịnụ enwere ọtụtụ ebe etiti; Melissa Maclean kwenyere na Kenja ga-aga n'ihu, ọ bụ ezie na ọ maghị ogologo oge na ọnọdụ (Kohn 2008). Jan Hamilton agafeela afọ iri asaa, ọ na-esikwa ike ikpebi ma ọgbọ ọhụrụ nke ndị Kenjans dị.
Otú ọ dị, o yighị ka ọtụtụ akụkụ nke ngosipụta onwe onye nke ndị Dyers na Hamilton curation nke aha ya na-esiteghị na ngbanwe nke omume na narị afọ nke iri abụọ na otu na Australia. Iji maa atụ, kwa afọ Kenja na-agụ akwụkwọ ebe a na-eme picnic na Balmoral Beach dị na Sydney na Kansụl Mosman, iji mepụta ngosipụta nke ọdịda nke ụgbọ mmiri mbụ, nke Arthur Philip, onye isi gọọmentị mbụ nke New South Wales, bụ onye isi ya. na 26 Jenụwarị (Tang 2017). Datebọchị a bụ ezumike ọha, ụbọchị Ọstrelia, na-eme emume mbido White. Kaosinadị, maka ụmụ amaala Ọstrelia a na-echeta ụbọchị a dị ka "ụbọchị mbuso agha" ma ruoro uju dị ka oge nke ijichi ala ha n'ụzọ iwu na-akwadoghị na mbibi nke ọdịbendị ha. Ndị Australia na-eto eto nwere ọmịiko na ndegharị a, na ntinyeghachi nke Kenja nke ụgbọ mmiri nke mbụ ahụ gosipụtara oge ochie, ndị ọchịchị colonial, na ikekwe ọbụna ịkpa ókè agbụrụ na ndị Australia oge a. Ọrụ ndị ọzọ na-agba akaebe na ọnụnọ nke Kenja gụnyere ịgụ egwu ụmụaka na nzukọ ọmụmụ nkwukọrịta. Otú ọ dị, ọrụ ndị a, dị ka Ikpe ikpe ruo mgbe egosi na aka ya dị ọcha na mmekorita nke ụbọchị Australia agaghị enwe isi ọganiihu, ebe ha na-adọta mkpuchi mgbasa ozi na-adịghị mma (Tran 2016).
Onye okwu Stephen Mutch webatara Kenja n'ihu ọha na nzuko omeiwu NSW na 1992, na ebubo mmegide mmekọahụ nke 1993 megide Ken Dyers mere ka otu a bụrụ aha ụlọ. Abụọ n'ime isiokwu ndị ọkà mmụta atọ dị na isi na-ekwu maka Kenja (ihe niile bụ naanị otu n'ime ọtụtụ ikpe ọmụmụ), ndị Katherine Biber dere na Dyers na nke ikpe Queen na 1993 na James T. Richardson na ọgwụgwọ mgbasa ozi nke ọhụrụ okpukpe dị na Australia (nke na-atụle ebubo Kenja wetara na Association nke ndị odeakụkọ Australia megide onye nta akụkọ nke zoro aka na Kenja dị ka "òtù nzuzo") na-elekwasị anya na asịrị ndị mbụ ahụ (Biber 2005; Richardson 1996: 294-95). Ewezuga ebubo mmekọahụ megide Dyers, ọgba aghara abụọ ọzọ kpatara nsogbu njikwa ihe oyiyi maka Kenja. Ndị a bụ ikpe Cornelia Rau na ọtụtụ ndị bụbu Kenjans ndị dara mbà n'obi ma nwụọ ma ọ bụ gbuo onwe ha. Melissa Maclean na Luke Walker nyere oge na Beyond anyị Ken maka ikpe Richard Leape na Michael Beaver. Ha abụọ mepụtara ọrịa ọgụgụ isi; Leape nwere oké ịda mbà n'obi wee pụọ na 1993 (Doherty 2006), na schizophrenic Beaver, onye otu Kenja ruo afọ abụọ, gburu onwe ya (Mutch 1993).
Cornelia Rau bụ nwa amaala German nke bụ onye Australia na-adịgide adịgide. Ọ bịara mara ọkwa nke ndị nta akụkọ na 2005 mgbe achọpụtara na ejidere ya n'ụzọ iwu na-akwadoghị maka ọnwa iri na 2004-2005 na Baxter Detention Center maka ndị kwabatara na iwu na-akwadoghị. Rau na-arịa ọrịa uche ma nye aha ndị uwe ojii aha ya bụ Anna Brotmeyer bụ onye jidere ya na mbụ na Queensland (Manne 2005). A tọhapụrụ Rau na njide ma laghachikwuru ndị ezinụlọ ya na mbido 2005, na-arịa ọrịa isi ike. Emechara gosipụta ya na 1998, ka ọ nọ ezumike na ọrụ ya dị ka onye ọrụ ụgbọ elu Qantas, ọ sonyeere Kenja. Onye ọka mmụta na mmekọrịta ọha na eze bụ Robert Manne kọwara otú ọnọdụ uche uche nke Rau si jụ ka ọ gosipụtara omume Kenjan, gụnyere “esemokwu” ahụ. Mann kọwara na "ọhụụ" bụ "ikpughe ihe nzuzo na mmetụta nke mmadụ na nnọkọ ọha na eze na-enweghị ịdọ aka ná ntị tupu oge eruo," ezubere iji mee ka ndabere Kenjan dabere na nnabata ndị Dyers na ndị otu (Manne 2005). A katọrọ Rau n'ihi enweghị nkà ya, gwa ya na o nwere "mmụọ ọjọọ," ma nwee mmasị na mmasị ịhụnanya ụgha nke nwoke Kenjan, nke yiri ka ọ bụ "usoro Kenja dị iche iche, ezubere iji mee ka nwoke na nwanyị nwee mmekọahụ na enweghị ịhụnanya na-alaghachi ”(Manne 2005). Rau nwetara psychosis mgbe “esemokwu” kpụ ọkụ n'ọnụ na Hamilton na Dyers kpọgara ya n'ọdụ ụgbọ elu Tullamarine nke Melbourne, tinye ya n'ụgbọelu, ma gwa ya ka ọ ghara ịlaghachi Kenja. Mgbe e mesịrị Rau “kwuru ugboro ugboro na e metọrọ ya n'ụzọ mmekọahụ mgbe ọ nọ na Kenja. Mgbe ole 60 Nkeji jụrụ ya ihe kpatara na ọ jụ ịnye ezigbo aha ya ndị nwe obodo mbata na ọpụpụ, o kwuru maka ụjọ ya maka ịbụ onye otu nzuzo ahụ jidere "(Manne 2005).
Kenja, n’okpuru nduzi nke Hamilton na-akpagbukwa ndị na-ebo Dyers ebubo. Hamilton kwenyesiri ike na ọ bụ ebubo ahụ Alison Pels kwuru (ndị mụrụ ya nọ na Kenja ruo ọtụtụ iri afọ, onye nna ya bụ Martin Pels nyekwara aka na ego ndị Dyers) mere Dyers ji gbuo onwe ya. Ọ gara nnukwu ogologo iji taa Alison Pels ahụhụ, gụnyere nyocha nke nyocha adịgboroja (maka Anton Chekov's Smụnna nwanyị atọ) na Ọktọba 17, 2007. A kpọrọ Pels, na-achọ ịbụ onye na-eme ihe nkiri, ka ọ gaa nyocha, ebe Hamilton, onye yi uwe dịka nwoke (Kontominas 2008) wakporo ya ọnụ. Alison Pels chọrọ nchedo iwu site na otu a, usoro ikpe ụlọ ikpe gosipụtara na Hamilton na Kenja mere onwe ha alibis maka ụbọchị nyocha ahụ. Ihe ịma aka ndị kachasị na Kenja na-eche ihu n'ọdịnihu bụ na Hamilton na ndị otu na-aga n'ihu na-aka nká, omume nchedo ha maka aha Dyers na nlelị ha na-eleda usoro iwu nke ụlọ ikpe Australia adịghị amasị ndị ọhụụ ọhụrụ, na omume ha na omume ha. enweghị mmetụta na ọdịbendị ọdịbendị nke oge a, Australia na-anabata ihe.
FotoFoto # 1: Ndị guzobere Kenja Ken Dyers na Jan Hamilton.
Foto # 2: Nzukọ Kenja.
Image # 3: njirimara Kenja.
ABC. 2009. "Na-akwụ ụgwọ iji kpochapụ aha - Ọzọ." Mgbasa Ozi, August 17. Nweta site na https://www.abc.net.au/mediawatch/episodes/paying-to-clear-a-name—again/9974830 na 15 February 2019.
Albeck, Rebecca. 2009. “E wezụga Ken anyị: Gwa ndị nkiri ahụ okwu. ” Magazin Metro: Media & Education Magazine 160: 88-90. Nweta site na https://search.informit.com.au/documentSummary;dn=879246368289311;res=IELAPA na 15 February 2019.
Anon. 2007. "Cult ndú Dyers ugbu a 'a nwụrụ n'ihi okwukwe'." ABC News, July 30. Nweta site na http://www.abc.net.au/news/2007-07-30/cult-leader-dyers-now-a-martyr/2517460 na 15 February 2019.
"A Witchhunt: Ikpe ikpe ruo mgbe egosi na aka ya dị ọcha." nd Weebụsaịtị Kenja Trust. Nweta site na
http://www.guilty-until-proven-innocent.com/default.aspx na 3 March 2019.
Biber, Katherine 2005. "Na-ekwu Okwu: Ikike nke ịgbachi nkịtị, onye ikpe ikpe ahụ tara ahụhụ, na onye nlere anya nke mmegbu ụmụaka." Akwụkwọ Iwu Iwu Ọzọ 30: 19-33.
Cannane, Steve. 2016. Egwuregwu ziri ezi: Akụkọ na-enweghị atụ nke akụkọ banyere Scientology na Australia. Sydney: Akwụkwọ ABC.
"Ngalaba-guzobere: Ken Dyers." nd Weebụsaịtị Kenja Trust. Nweta site na http://www.kenja.com.au/co-founders/Ken-Dyers.aspx na 1 March 2019.
Educationlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Okpukpe. 2014. Kenja Communications. Nweta site na http://www.culteducation.com na 11 February 2019.
Cusack, Carole M. 2017. "Squirrels" na ojiji a na-ejighi ikike nke Scientology: Werner Erhard na Erhard Seminars Training (est), Ken Dyers na Kenja, na Harvey Jackins na Re-evaluation Counselling. Pp. 485-506 na Akwụkwọ ntuziaka nke Scientology, nke James R. Lewis na Kjersti Hellesøy dere. Leiden na Boston: Brill.
Doherty, Madeleine. 2006. “Mmekpa Ahụ Nne.” Akụkọ kwa ụbọchị, August 2. Nweta site na https://www.tweeddailynews.com.au/news/apn-mothers/146584/ na 15 February 2019.
Elliott, Tim. 2010. "Kenja: Na-alụ ọgụ unyi megide a Cultbuster." Sydney Morning Herald, February 4, p. 27.
Fidler, Richard. 2008. "Onye na-ese ihe nkiri Melissa Maclean." ABC Redio: Oge Mkparịta ụka, September 15. Nweta site na http://www.abc.net.au/local/stories/2008/09/15/2364843.htm na 18 October 2019.
Gillan, Kimberly. 2012. “Ahapụrụ m ụmụ m ka ha gaa n’otu Kenja.” Akụkọ.Com.Au, October 15. Nweta site na https://www.news.com.au/lifestyle/relationships/i-left-my-kids-for-kenja-group/news-story/dd0f478cad388badb653a9c7568812d1 na 18 October 2019.
Irvine, Maartje. 1995. Kenja: Nchọpụta nke gedtù Okpukpe. Onye ndụmọdụ Criminologist Report, peeji 21.
Weebụsaịtị Kenja Trust. nd "Nkwukọrịta Kenja: Nghọta Ime Mmụọ na World Physical." Nweta site na www.kenja.com.au na 11 February 2019.
Knott, Kim. 2005. "Ọnọnime / n'èzí echiche." Pp. 243-58 na Onye ọrụ Routledge na-amụ banyere Okpukpe, nke John R. Hinnells dere. London na New York: Ntugharị.
Kontominas, Bellinda. 2008. "Okpukpe nchoputa dọrọ aka ná ntị mgbe 'aru' nyochara aghụghọ." Camden Haven Courier, August 26. Nweta site na https://www.camdencourier.com.au/story/810538/cult-founder-warned-off-after-bizarre-audition-ploy/ na 15 February 2019.
Kohn, Rachael. 2008. “Ndụ na Kenja.” ABC Radio: Mmụọ nke Ihe, November 16 (ye Melissa Maclean ye Bevan Hudson). Nweta site na:https://www.abc.net.au/radionational/programs/spiritofthings/life-in-kenja/3174952 na 18 October 2018.
Maclean, Melissa na Luke Walker. 2008. Beyond anyị Ken. Australia: Scribble fim.
Manne, Robert. 2005. "Akụkọ Na-amaghị Ama banyere Cornelia Rau." Kwa ọnwa, September. Nweta site na https://www.themonthly.com.au/monthly-essays-robert-manne-unknown-story-cornelia-rau-often-she-cried-sometimes-she-screamed-she-be na 11 May 2015.
Mitchell, Georgina. 2018. “Onye Mmekọ nke ndị nwụrụ anwụ 'òtù nzuzo' suing steeti NSW n'elu uwe ojii nyocha ahụ biri na igbu onwe ya.” Sydney Morning Herald, October 21. Nweta site na https://www.smh.com.au/national/nsw/partner-of-deceased-cult-leader-suing-state-of-nsw-over-police-investigation-that-ended-in-suicide-20181018-p50agj.html na 24 October 2018.
Mutch, Stephen. 1993. "Ọrụ Okpukpe na New South Wales." NSW mmebe iwu Council Hansard, April 22. Nweta site na https://culteducation.com/group/1011-kenja-communications/11935-cult-activity-in-new-south-wales.html na 16 February 2019.
National Archives nke Australia. 2017. "Kenneth Emanuel Dyers." Nweta site na https://recordsearch.naa.gov.au/SearchNRetrieve/Interface/ListingReports/ItemsListing.aspx na 15 February 2019.
Ọ́bá Akwụkwọ Mba Australia. 2006-2007. "Anyị na-asọpụrụ ndụ nke nnukwu Australian." Onyebuchi Trust. Nweta site na http://pandora.nla.gov.au/pan/75501/20070807-1705/www.kendyers.com/MediaRelease/tabid/292/Default.html na 15 February 2019.
Richardson, James T. 1996. "Nkọwa Akụkọ Banyere Mgbanwe Okpukpe Ọhụrụ n'Australia." Journal of Contemporary Religion 11: 289-302.
Samways, Louise. 1994. Ndị Na-achọ Ize Ndụ Dị Ize Ndụ: Ngosipụta nke Gurus, Usoro Mmụta nke Onwe na Ndị Nzuzo, na Otu Ha Si Arụ Ọrụ n'Australia. Ringwood, Victoria: Penguuin Australia.
Scott, Perry. Na "Scientology Ọzụzụ Eme." Ntụle dị oke egwu. Nweta site na https://www.cs.cmu.edu/~dst/Secrets/TR/critique.html na 11 February 2019.
Stephens, Annette. 2012. Ezi Nwa Nwaanyị: Ọ Nọgidere Na-agbachi nkịtị ruo ogologo oge. Newport, NSW: Nnukwu Igwe Na-ekwusara.
Nchara, Sarah. 2017. "Nkwukọrịta Kenja." Ka anyị kwurịta banyere òtù December 13. Nweta site na http://www.ltaspod.com/4 na 18 October 2018.
Tang, Caroline. 2017. "Onye nchoputa Kenja Ken Dyers - onye ebubo ebubo - echetara ụbọchị Australia na Mosman." Mosman kwa ụbọchị, January 25. Nweta site na https://www.dailytelegraph.com.au/newslocal/mosman-daily/kenja-founder-ken-dyers-an-accused-paedophile-remembered-on-australia-day-in-mosman/news-story/9919c72d78cc03315590a77300ebb2bb na 15 February 2019.
Tibbetts, Alex. 2008. "Mmegbu Ikpe: Ndị ọrụ 'jụrụ ịgha ụgha'." Mudgee Guardian, July 25. Nweta site na https://www.mudgeeguardian.com.au/story/808086/abuse-case-staff-asked-to-lie/ na 15 February 2019.
Tibbitts, Alex. 2007. "Mgbasa Ozi iji kpochapụ Onye Ndú Okpukpe." Sydney Morning Herald, August 11. Nweta site na https://www.smh.com.au/national/campaign-to-clear-cult-leader-20070811-gdqu3m.html na 15 February 2019.
Tran, Cindy. 2016. "Otu 'ọgwụgwọ ime mmụọ' onye ndu ya gburu onwe ya mgbe e boro ya ebubo imejọ ụmụaka na-akwado usoro ihe nkiri ụmụaka." Ozi ntanetị, Mee 8. Nweta site na https://www.dailymail.co.uk/news/article-3073046/Spiritual-healing-cult-leader-committed-suicide-charged-child-sex-offences-emerges-holding-children-s-concerts.html na 15 February 2019.
Urban, Hugh. 2011. Church of Scientology: A History of a New Religion. Princeton, NJ: Mahadum Princeton University.
Westbrook, Donald A. 2017. "Na-enyocha Scientology na Scientologists na United States: hodszọ na Mkpebi." Pp. 19-46 n'ime Akwụkwọ ntuziaka nke Scientology, nke James R. Lewis na Kjersti Hellesøy dere. Leiden na Boston: Brill.